Xog: Waa maxay sababta uu QOOR QOOR meesha uga saarayo Abshir Bukhaari? - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon Xog: Waa maxay sababta uu QOOR QOOR meesha uga saarayo Abshir Bukhaari?
Xog ay Allbanaadir Media ka heshay ilo-wareedyo ku dhow madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa xaqiijineysa in Qoorqoor uu labadii todobaad ee la soo dhaafay ku mashquulsanaa sidii uu meesha uga saari lahaa kurisiga Aqalka Sare ee uu ku fadhiyo Abshir Bukhaari.
Sida ay ogaatay Allbanaadir Media, Farmaajo ayaa sidoo kale arrintan ku tijaabinaya daacadnimada Qoorqoor iyo sida uu uga soo dhalaali karo fulinta dib-u-doorashada madaxweyne Farmaajo.
Xogta ay heshay Allbanaadir Media ayaa sheegeysa in durbaba uu Qoorqoor billaabay isku dayga ah kursigan loo wareejiyo Golaha Shacabka, si Abshir meesha looga saaro. Waxaa sidoo kale suurta-gal ah in kursigan uu Qoorqoor siiyo qof jufo hoose la ah Abshir Bukhaari, si uu xitaa uga rajo tiro Golaha Shacabka.
Waxaa la xaqiijiyay in Senetor Samsam oo ka mid ah kooxda Farmaajo dib loo qorayo, halka xildhibaan Cabdixakiin Macallin Axmed oo ku dhow Farmaajo kursigiisa loo soo wareejinayo Aqalka Sare, si loo damaanad qaado in uu dib u soo laabto, taas oo muujineysa dadaalka uu Qoorqoor ku bixinayo dib-u-soo laabashada Farmaajo.